Account Format Solutions
စာရင်း ပုံစံနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပေးခြင်း
Account Format ခေါ် စာရင်းပုံစံ (သို့မဟုတ်) စာရင်းမူဘောင် ချခြင်းသည် စာရင်းဇယားနှင့် စနစ်တကျဆောင်ရွက်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဥ်ပင် ဖြစ်သည်။ Account Format သည် လုပ်ငန်းရှိ ရေရှည်လည်ပတ်မည့် စာရင်းဇယားစနစ် (Accounting System) ကြီးတစ်ခုလုံး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်လည်းဖြစ်သည်။ Account Format ခိုင်ခိုင်မာမာ နှင့် မှန်မှန်ကန်ကန်ချမှတ်ထားမှ အရှုံးအမြတ်စာရင်းများကိုက်မည်၊ အသုံးစရိတ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်မည်၊ ရေရှည်တွင် Budget ဆွဲခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးစီမံချက်များဆွဲခြင်းတွင် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
Account Format ဆိုတာဘာလဲ
လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ စာရင်းဇယားစနစ် (Accounting System) မှာ များစွာသော စာရင်းမှတ်တမ်းတွေ/စာအုပ်တွေ/ Excel Sheets တွေပါပါတယ်။ ဘယ်လိုဟာတွေလဲ?
နေ့စဉ်ငွေ အဝင်၊အထွက်စာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာစာရင်းခေါင်းစဉ်များ ခွဲခြားပြီး ရေးသွင်းတဲ့ Cash Book Ledger (ငွေစာရင်းစာအုပ်)
လုပ်ငန်းရဲ့ နေ့စဉ် ငွေဝင်/ ငွေထွက်ဘောင်ချာ (Credit/ Debit Vr) တွေကိုကြည့်ပြီး ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေစာရင်းတွေကို ရေးသွင်းရတဲ့ General Ledger (အထွေထွေလယ်ဂျာ)
နေ့စဉ်အရောင်းစာရင်းတွေ၊ ကုန်သည်တွေဆီ ပစ္စည်းပို့တဲ့ ကုန်ပို့လွှာစာရင်းတွေကို မှတ်တဲ့ Daily Sale Ledger (နေ့စဉ်အရောင်းလယ်ဂျာ)
ကုန်ရောင်းလယ်ဂျာကိုကြည့်ပြီး Debtor A/C (အကြွေးရရန် ကုန်သည်စာရင်း) တစ်ဦးချင်းအလိုက်စာရင်းသွင်းထားရတဲ့ Receivable Ledger (အကြွေးရရန်ရှိသော ကုန်သည်စာရင်းလယ်ဂျာ)
နေ့စဉ်မိမိလုပ်ငန်းက ဝယ်ရတဲ့ အဝယ်စာရင်းတွေ၊ ကုန်ကြမ်းသွင်းသူတွေဆီက ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိရင် ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံလွှာ စာရင်းတွေကိုမှတ်တဲ့ Daily Purchase Ledger (နေ့စဉ်အဝယ်လယ်ဂျာ)။
ကုန်ဝယ်လယ်ဂျာကိုကြည့်၍ Creditor A/C (ကိုယ့်ဘက်ကပေးရန်ကုန် သည်စာရင်း) တစ်ဦးချင်းအလိုက် စာရင်းသွင်းရတဲ့ Payable Ledger (ပေးရန်ရှိသော ကုန်သည်စာရင်းလယ်ဂျာ)
နေ့စဉ် ကုန်ဝယ်၊ ကုန်ရောင်းစာရင်းတွေကတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်း အဝင်၊ အထွက်စာရင်းများ ရေးသွင်းရတဲ့ Inventory Ledger (ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းလယ်ဂျာ)
စတဲ့ စာရင်းမှတ်တမ်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ် (ဒါကအပေါ်ယံပဲရှိပါသေးတယ်)။ ဒီလို စာရင်းမှတ်တမ်းတွေလုပ်ရတဲ့အခါ သူ့နေရာနဲ့သူ သူ့ခေါင်းစဥ်အောက်သူ မှန်မှန်ကန်ကန်သွင်းဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန် သွင်းနိုင်အောင် ပုံစံ Framework ချပေးတာကို Account Format ချတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
Account Format ကဘာလို့အရေးကြီးသလဲ?
Account Format ဟာ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို့ လုပ်ငန်းရဲ့ Accounting System ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ အသက်သွေးကြောဆိုတော့ အရေးကြီးတာကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ပါပဲ။ Account Format ဆိုတာဟာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့စာရင်းမှတ်တမ်းတွေရှိနေရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ စာရင်းမှတ်တမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းရဲ့ သဘောတရားနဲ့ Process အပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ငန်း တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုမတူညီကြတဲ့အတွက် ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ ပိုမှတ်ရတဲ့ စာရင်းတွေရှိသလို၊ မလိုအပ်တဲ့ စာရင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပိုအရေးကြီးတာက ကိုယ်ချထားတဲ့ Account Format ဟာ စာရင်းကိုင်စံနှုန်းတွေနဲ့ ညီရဲ့လား? ခေါင်းစဥ်ခွဲတာတွေ ဇယားချိတ်ဆက်တာတွေ မှန်ရဲ့လား? ရှင်းရှင်းပြောရရင် တကယ်ရော Format ကျရဲ့လား? ဘာလို့ ဒီမေးခွန်းကို မေးရသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဥပမာ တစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပါမယ်။
ဥပမာ - လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ Expense (အသုံးစရိတ်) နဲ့ Cost of Good Sold (ရောင်းကုန်ရဲ့တန်ဖိုး) ဆိုပြီးရှိမယ်။ အဲ့နှစ်ခုကို မှန်မှန်ကန်ကန်မသွင်းပဲ အသုံးစရိတ်တစ်ခုကို ရောင်းကုန်တန်ဖိုးထဲ သွားထည့်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ? ရှင်းပါတယ် ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းစျေးက ပြိုင်ဘက်တွေထက် များသွားမယ်၊ စျေးကြီးတော့ ဖောက်သည်တွေက ရှောင်သွားရော။ ဒါဆို Cost of Good Sold ထဲထည့်ရမယ့် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူစရိတ်ကို Expense ထဲသွားထည့်ရင်ကော? ရှုံးပြီပေါ့၊ အရင်းတွေပါသွားပြီလေ။
Account Format အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဒါပါပဲ။ အဝင်၊အထွက် သေးသေးလေးကအစ မှားသွင်းလို့မရပါဘူး။
Account Format ကိုဘယ်သူတွေလိုသလဲ?
ဘာလို့ Account Format ချဖို့ Balance ကိုခိုင်းမလဲ?
Balance က စာရင်းကိုင်ပညာရှင်တွေက ဒီအပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်မှုရော အတွေ့အကြိုရောရှိပါတယ်။ မိမိအလုပ်ထဲကို စိတ်နှစ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြသလို တာဝန်ယူမှုလည်းရှိပါတယ်။ Balance ကို Account Format ချခိုင်းပြီဆိုတာနဲ့ Balance အဖွဲ့ဟာ လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံနဲ့ လက်ရှိစာရင်း အသွားအလာတွေကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အရင်ဆန်းစစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ Accounting Logic တွေနဲ့ ထပ်တလဲလဲစမ်းသပ်ပြီး လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းနဲ့ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ Format တစ်ခုကို အစအဆုံးပြန်လည်ရေးဆွဲပါတယ်။ စတင်ရေးဆွဲအချိန်က စပြီး ရေးဆွဲလို့ပြီးသည်အထိ တစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ လူကြီးမင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ် လာရောက်တွေ့ဆုံတာတွေ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းတာတွေ အမြဲလုပ်တဲ့အတွက် စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး လုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ် အသုံးဝင်တဲ့ Format တစ်ခုကိုချမှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေးဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်က မပြီးသေးပါဘူး၊ ဒီစာရင်းဇယား Format ကြီးကို လက်တွေ့ကိုင်တွယ်မယ့် လူကြီးမင်းတို့ဆီက စာရင်းကိုင်ကိုလည်း လက်တွေ့သင်ကြားပေးပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ လူကြီးမင်းတို့ စာရင်းကိုင်ဝန်ထမ်းပြောင်းသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်မရွေး ကိုးကားနိုင်အောင် လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းရဲ့ Account Format အတွက်သီးသန့်ပြုစုထားတဲ့ Accounting Manual/ စာရင်းကိုင်လက်စွဲကိုလည်း တစ်ပါတည်းရေးသားထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့တင် ကျွန်တော်တို့ Balance ရဲ့တာဝန်ယူမှုက မပြီးသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ စာရင်း Format ကို လူကြီးမင်းတို့ အသုံးပြုပြီး တစ်လအကြာမှာ ဒီ Format ကို အခြေခံပြီး တစ်လစာ အရှုံးအမြတ်စာရင်းကို အထူးဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ အခမဲ့ရေးဆွဲပေးပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ Account Format နဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျွန်တော်တို့ Balance ကို စိတ်အေးအေးနဲ့ ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
လူကြီးမင်း အနေဖြင့် လုပ်ငန်းရဲ့ လက်ရှိ Account Format နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံဉာဏ်ရယူလိုတယ်ဆိုပါက Balance Professional Services မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ရန် ယခုပဲ ဖုန်းနံပါတ် 09-966-118-536 သို့ဆက်သွယ်၍ ရက်ချိန်းရယူလိုက်ပါ။